संस्मरण Archives - sailungonline
रातीदेखि नै झमझम परिरहेको पानी बिहान हुँदा पनि रोकिएन । काठमाडौँबाट मण्डनदेउपुरको कुन्ताबेँशी हुँदै तिमालसम्मको यात्राको थकानले छ्याङ उज्यालो हुँदासम्म पनि म नउठीकन ओछ्यानमै पल्टिरहेँ । गाउँका प्राय सबै घरहरू २०७२ सालको ...
कोभिड—१९ ले तहल्का मच्चाइ रहेको अवस्थामा कोठाभित्रै कैदी बन्नुको विकल्प छैन । समय काट्नको लागि अहिले फेसबुक सबैभन्दा प्रिय मित्र बनेको छ । केही समय यता फेसबुक पनि तस्बिर सहित श्रद्धाञ्जली सन्देश अर्पण गर्ने दुर्सा डाँडा ...
साउनको महिना । पूर्वतिर फर्किएको भिरालो गाउँ । बारी, पाखा, भित्ता, डाँडा जताततै हरियै देखिन्थ्यो । खेतीपातीको असाध्यै चटारो । मकै दोहोर्याउने (दोस्रोपल्ट गोड्ने), दलहन बाली छर्ने, बेँसी खेतहरुमा पाकेको वर्षे धान भित...
अक्सर हाम्रो घरमा पाहुना टुट्दैनथ्यो । प्रायः हामी कहाँ आउने पाहुनाहरू आफन्तहरू नै हुन्थे । तर एक साँझ हाम्रो घरमा एक अपरिचत जोडी आएका थिए अतिथि बनेर । कुरा २०२९ सालतिरको हो । त्यस्तै चार वर्षको उमेर थियो, मेरो । घरको...
केही समय मलाई मेरै गाउँमा रोक्यो लकडाउनले । जिन्दगीले फेरि मलाई उही जिन्दगीको अनुभूत गरायो । मैले माटोको सुवास लिएर फर्कें मेरै थातथलोको । धन्य छ लकडाउन ! ० ० ० निरन्तर व्यवसायकै तनमयतामा थिएँ म । वसन्त ऋतुभरि खासै...
म फेसबुकमा कविता अपलोड गर्नबाहेक अरु खास समय बिताउँदिन । म्यासेन्जेर च्याट र भिडियो कलप्रति वास्ता राख्दिनँ । सायदै आवश्यक कुरा रहेछ भने फोनमा भइहाल्छ नि भन्ने लाग्छ तर यिनै पुरातन सोचका कारण माम बितेको लामो समयसम्म म बे...
दक्षिण कोरियामा हिउँ फूल फुल्ने याम शुरु भएको थियो । चिसो सिरेटो चल्न थालेको थियो । चोक, भट्टी, बार र सडकमा खस्ने बाक्लो तुसारोले दैनिकीलाई प्रभावित पार्न थालिएको थियो । त्यसैले मानिसहरु सक्दो घरभित्रै बस्थे । बोईलर जडान...
बि.सं. २०६४ साल अशोज महिनाको १७ गते बिहान पुरानो बसपार्कको चौतारा जाने बसमा सुरु गरेको पाँच पोखरीको यात्रामा पाँच जना पर्यटकसहित हामी १५ जना सिंहदरबार, माईतीघर, बानेश्वर, कोटेश्वर सल्लाघारी हुँदै नालिञ्चोक पुग्दासम्ममा स...
सुरुमै भनिहालूँ– म लेखक होइन । तर, मित्र नवराज अजनवीजीले नेपालदेखि कोरियासम्मको यात्रा संस्मरणको बारेमा एउटा आलेख तयार पार्न अनुरोध गर्नु भयो । म कोशीस गर्नेछुु भनेर मैले वहाँको आग्रहलाई पटक पटक टार्दै आएको थिएँ । आज फेर...